Tag: ahịa agile | Martech Zone
Tag: ahịa agile
Dị ka a na onye òtù ọlụlụ na-arụ ọrụ na enterprise ụlọ ọrụ, m ụbọchị bụ a blur na kalenda m bụ a ọgbaghara - bouncing si ahịa, ka atụmatụ, na-eguzo-acha ọkụ, na onye, ​​na onye na-abụghị nzukọ na-akwụsị. N'etiti oku ndị a niile, ọ dị m mkpa ịrụ ọrụ ahụ nke mụ na ndị ahịa metụtakwara! Otu ihe m meworo n’oge gara aga bụ naanị igbochi oge na kalenda m iji hụ na m
Ka ndị otu mmepe na-eto ma na-abawanye, ha malitere inwe ọtụtụ nsogbu. Otu nnukwu nzukọ nwere ike wepụta kwa ọnwa na narị otu narị ndị mmepe na-ede ọtụtụ puku koodu nke na-arụ ọrụ nke ọma na mpaghara, mana kpatara isi ọwụwa na nkwekọrịta na ndagide mmesi obi ike. Mgbapu ndị a ga - eduga na ewepụ atụmatụ, igbu oge na wepụta, yana nzukọ na ịgbago usoro iwu iji nwalee ma wepu mgbochi. Usoro agile nyere iche
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 2 gara aga, Jascha Kaykas-Wolff kesara ihe Agile Marketing bụ na ihe kpatara ụlọ ọrụ ji gbanwee usoro ha iji tinye usoro. Ọbụna ma ọ bụrụ na ibudata akwụkwọ Jascha, gbaa mbọ hụ na ị gụrụ isiokwu na-aga omimi banyere ahịa agile. Ya mere, olee ókè anyị rutere? Workfront weputara nsonaazụ ahịa Agile Marketing Survey nke MarketingProfs mere na ntanetị, ma lee isi ihe ole na ole: 41% nke ndị ahịa na-eji usoro Agile iji jikwaa ọrụ 43% nke